Genesis Total Care....Ultra - I-Airbnb
Igumbi lakho lokulala e indlu encinci sinombuki zindwendwe onguLinda
IZiko eliSekelwe eKhaya/neMpilo-ntle (aka) ISabelo seKhaya lesiSekelo siyafumaneka kwiholide/ukuba sempilweni emsebenzini ukubaleka. Ifakwe kwiLake Bemidji entle, encoma nayiphi na impilo entle / uhambo lweholide. Abahambi bayakhuthazwa ukuba ukonwabele ukuhlala kwakho okanye bathathe inxaxheba kuhlolo olupheleleyo lwempilo kwaye banandiphe eyona nzuzo ikhethekileyo yeziko lonyango lobubele. Le Health Get-Away ibonelela ngeendlela zokuguqula ubomi. OKONGEZELELWEYO...I-HALOTHERAPY & UKULOBA OKUKHOKELELWAYO. Bhukha iintsuku ezisi-7 okanye ngaphezulu...fumana izaphulelo
Igumbi lokulala labucala elinebhedi enkulukazi, kunye nebhedi engamawele yabantwana okanye umntu omdala owongezelelekileyo. Intlawulo eyongezelelweyo ngobusuku bonke kwiindwendwe ezingaphaya kwe-2. Kwakhona kukho indawo yokunxiba, indawo yokulala kunye nendawo yangasese encinci yepatio engasemva ebonelelwe iindwendwe zethu. Zonke iindwendwe zamkelekile ukuba zisebenzise ipatio esecaleni kwechibi eyindawo ekwabelwana ngayo ngamanye amaxesha. Le ndawo yeendwendwe inomnyango wabucala ovumela iindwendwe ukuba zize kwaye zihambe ngaphandle kokuphazamisa naluphi na olunye ixesha lokuqeshwa ngaphakathi kwendawo yobuchwephesha kodwa epholileyo. IGenesis Total Care Ultra ....Iziko le-Wellness Retreat Centre lizama ukubonelela ngentuthuzelo, ukuphumla, kunye nokuvuselela kwi-presentation yendalo eboshwe ekuphiliseni.
I-Wellness Retreat Centre ikwingingqi ezolileyo, elunxwemeni lwechibi, imithi yepine, kunye nembono yawo wonke umsebenzi wasehlotyeni eLake Bemidji. Zininzi iindlela zokuhamba ezikufutshane kunye nokufikelela kwindawo yokurenta iithoyi zamanzi. Ichibi lisebenzisana nomsebenzi lonke ixesha lasehlotyeni kwaye linesixeko salo esincinci xa kuqala ukuloba komkhenkce ebusika.
Iindwendwe ziza kwaye zihambe ngendlela ezithanda ngayo, kodwa siyafumaneka ukuze siqeshwe kuNyango ukuba zinqwenela njalo kwaye sibonelela ngalo naluphi na uncedo xa lufuneka. Sizama ukunika indawo yokuhlala ekhuselekileyo nekhululekileyo.